SOMALITALK - BAARITAAN
Maxaa ku soo celiyey Puntland safarkiisan hada ah kornayl C/laahi Yusuuf?
Qore: Osman Ahmed Sheikh
Waxaan marka hore ka cudurdaaranayaa qoraalkan oo aad udheer sababtuna tahay waraysiyo kala duwan oo aan dad badan kala yeeshay arintan iyo dacwad maxkamadeed oo aan qaybo ka soo qaatay.
Qore: XagarYare | Sept 1
Waxaa dad badan isweydiinayeen indhawaydba sababta kornayl C/laahi Yuusuf uu dib ugu soo laabtay Puntland, iyadoo shirku weliba marayo meel aad xasaasi u’ah.
Waxaa markii hore lagu sheegay in mudadii dastuurku ogolaa inuu dalka ka maqnaado ay dhamaad tahay. Waxaa kaloo la sheegaa in khilaaf xooglihi soo kala dhexgalay maamulkiisa xubnihii ugu sareeyey iyo kornaylka. Hadaba waxaa soo shaacbaxay asbuucii hore in sababta dhabta ah ee uu shirka uga soo tegay oo uu Puntland dib ugu soo laabtay inaysan ahayn sababahaas kore ee ay arintu intaas ka duwan tahay.
Waraysiyo aanu la yeelanay ilo xogogaala oo aad ugu dhaw kornaylka ayaa xaqiijiyey in wax ka jiraan in ay qayb ka tahay safarkiisan heshiis uu la bilaabayo beesha Suldaan Axmed Hurre. Hadaba waxaan baaritaan dheer kusameeyey arimaha marxuumakaas dilkiisii kadib iyo dacwad qoyskii marxuumku ka wado dalka dibadiisa iyo sidii loo dilay marxuumkaba.
Suldaan Axmed Maxamed Maxamuud oo loo yaqaan Hurre wuxuu ahaa nin aqoon yahan ah kuna takhasusay cilmiga dhaqaalaha. Suldaanku wuxuu muddo ku noolaa isaga iyo reerkiisaba dalka Ingiriiska halkaasoo uu markii danme qaatay dhalashada Ingiriiska.
Suldaan Hurre wuxuu dalka dib ugu soo noqday xiligii dagaalada sokeeye ay dalka ka socdeen, waxaana loo doortay Suldaan beesha Maxamed Cumar. Suldaanku wuxuu dhashay sannadku marku u ahaa 1957, waxaana uu geeriyooday Aug 17, 2002 xiligaasoo dil toogasho ah uu ku dilay mid ka mida ilaalada khaaska ah ee kornayl C/laahi Yuusuf, tuulada lagu magacaabo Kalabayr oo ka tirsan Gobolka Nugaal. Suldaanka ayaa sida la sheego isagoo ku jira gaarigiisii waxaa soo dul istaagay ilaaladaas kornayl C/laahi Yuusuf mid ka mida oo isagoon wax hadal ah aysan dhexmarin uu baas ku furay suldaanka, sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ahaa.
Hadaba si aan wax uga ogaado arinta suldaanka iyo dacwad la sheegay in laga diiwaan galiyey dalkaasi Ingiriiska, ayaa waxaa ii suuragashay inaan xiriir la sameeyo qareenka gacanta ku haya dacwad ay kornayl C/laahi Yuusuf ku soo oogeen caruurtii Suldaan Hurre . Hadaba dacwadaas oo laga diiwaan galiyey maxkamada lagu magacaabo High Court of Justice (Queen’s Bench division) galka loo furay numbarkiisuna yahay HO02X03221. Qareenka gacanta ku haya oo lagu magacaabo Mr Hanley ayaan weydiiyey inuu marka hore ii xaqiijiyo in dacwad ka dhan ah kornayl C/laahi Yuusuf uu faraha ku hayo, wuxuuse ka gaabsaday inuu wax faahfaahina ka bixiyo.
Waxaa hadaba ii suuroowday inaan helo qoraalkii dacwada ahaa ee lagu soo oogay kornaylka, iyo markii qoraalku soo gaaray kornayl C/laahi Yuusuf jawaabtii uu isku difaacay una diray maxkamada London, UK.
Dacwadan waxaa diiwaan galiyey magacayada hoos ku qoran.
Ibrahim Ahmed Mohmud
Amal Ahmed Mohmud
Idris Ahmed Mohmud
Sumeya Ahmed Mohmud
Dacwada waxay dadkani ku oogayaan .
Kornayl Abdullahi Yusuf Ahmed
Defendant’s Replies to the Request further information
Made on 19th May 2003.
The names and ranks of the members of the security forces sent to apprehend Ahmed Mahmud Mohamed in Kala-beyr on 17-08-2002 and the name of rank or office of the person who issued the instructions to apprehend Ahmed Mahmud Mohamed.The names and ranks of the individuals who shot and killed Ahmed Mahmud Mohamed. Details of the number or rounds fired by the members of the security forces in the exchange of fire. Details of any individual alleged to have exchanged fire with the members of the security forces. Datails of the where about of any weapon(s) alleged to have been used against the number of the security forces.
Koobi kamid ah waraaqaha dacwada ee Maxkamada London, UK
Hadaan idiin dul maro su’aalaha la weydiiyey waxay ku saabsanayeen.
Ugu horayn waxaa la weydiiyey magacyadda ciidamadii loo diray inay ka soo qabtaan Suldaan Axmed, tuulada Kalabayr 17-08-2002 iyo magaca sarkaalka ama qofka amray in la soo qabto Suldaan Ahmed. Waxaa kaloo la weydiistay faahfaahin ku saabsan tirada ciidamada amaanka ee ka qayb galay ridida xabadaha iyo sidoo kale faahfaahin ku saabsan cidii kale oo ka qayb gashay xabadahaas ay ciidamada amaanka is dhaafsadeen. Waxaa kaloo laweydiiyey hadii ay hayaan wax hub ah oo lagala horyimid ciidamada amaanka.
Su’aalahaas waa uu ka soo jawaabay kornayl C/laahi Yuusuf waana tan marka hore jawaabtiisii oo English ku qoran.
i-The police investigation into this matter is not yet concluded.
ii-The release of incomplete information would be prejudicial to any future prosecution and would be inappropriate in a case where peaceful relations between two or more clans might be effected.
iii-The police investigation was stayed after a request by clan elders who are conducting their own investigation. The request was granted on the understanding that should the elders fail to resolve the issue within a reasonable time the police investigation would resume and matter would be referred to the appropriate court.
iv-Islan Bashir Islan Abdulle and Abdiwahab Mahmood Gurey of the Omar Mahmud clan are among the elders carrying out the investigation.
v-The clan elders’ investigation has yet to be concluded.
Waatan anoo soo koobaya jawaabtii kornayl C/laahi usoo diray maxkamada Queens’s Bench Division oo aan afsoomaali ku soo koobay.
i-Baaridii ciidanka booliska wali ma aysan dhamaan.
ii-In la sii daayo baaritaan aan dhamaystirayn waxay dhaawici kartaa mustaqbalka in waxyeelayso qabaa’ilo deris wanaag ku wada noolaa.
iii-Ciidanka booliska ayaa baarida waday ilaa ay isimada qabaa’ilku ay warsadeen inay iyagu arintan baaraan. Kadibna waa laga aqbalay codsigooda ayadoo la fahamsanyahay hadii isimadu ku guuldaraystaan inay xaliyaan arintan wakhti xadidan in ciidanka boolisku hawsha dib ugu celin doonaan maxkamadaha ku shaqada leh.
iv-Islaan bashiir Islan Cabdulle iyo Cabdiwahaab Maxamuud Gurey oo ka mid ah isimada Cumar Maxamuud ayaa hawsha qaatay inay soo baaraan.
v-Baaritaankii Isimada qabaa’ilku wali ma soo dhamaystirmin.
Waa tan codsi kale ee ku socda Kornayl C/laahi yuusuf isagoo ku qoran English.
Full details of any forensic examination of the scene of the killing.
Faahfaahin ku saabsan baaridii lagu sameeyey maydka(waa qaliino lagu sameeyo maydka siduu udhintay iyo waxyaaba la xiriira)
See Reply 1 above. The deceased’s body was buried on the day of his death in accordance with the requirements of his religion and for customary reasons.
No post mortem examination was carried out.
Jawaabtii kornayl C/laahi su’aashaas kore ka bixiyey aan idiin dulmaro.
Maydii marxuumka waxaa la aasay isla maalintii uu dhintay ayadoo la tixraacayo sida ay qabto diintiisa iyo dhaqankiisu qabaan. Mana lagu samayn wax baarid ah maydka.
Waakan codsi kale:
Full and particularized details of the allegations contained in the defense that Ahmed Mahmud Mohamed was responsible for waging war on the state and causing the death of a number of people.
Waxaa la weydiistay faahfaahin dhamaystiran oo khaas ku ah dacwadiisa waa kornayl C/laahiye inuu soo bandhigo wax cadaynaya in marxuum Axmed Maxamuud Maxamed (Suldaan Hure) uu masuul ka ahaa in la qaado dagaal gobolka dagaalkaasoo sababay dhimasho tiro dad ah.
i-The Puntland State of Somalia was created in 1998. The vast majority of the population are displaced persons who were removed from their homes in Mogadishu and other regions of Somalia when the former government of Somalia was overthrown in 1991.
ii-The rules of Mogadishu have been trying to undermine the Puntland State of Somalia since its inception.
iii-In the summer of 2001 Colonel Jama Ali Jama rejected the decision of the Council of Elders and the House of Representative of the Puntland State Somalia to extend the mandate of the Puntland State.
iv-Colonel Jama Ali Jama paid fourteen members of the Council of Elders to elect him as president of the Puntland State of Somalia. Colonel Jama Ali Jama mobilised a private army and waged war on the regular army of the Puntland State of Somalia. The deceased was one of the elders paid by Colonel Jama Ali Jama to support him.
Jawaab celintii kornayl C/laahi Yuusuf oo aan af Soomaali ku soo koobay waa tan.
i-Gobolada Puntland ee Soomaaliya waxaa la aasaasay 1998 ka dib markii dad badan ay ku dhacday degaan la’aan oo aqaladoodii Muqdisho laga soo barabixiyey iyo gobolo kale oo Soomaliya ka mida, markii ay dhacday dawladii hore.
ii-Madaxda Muqdisho ayaa isku dayayeen inay daciifiyaan Puntland State ee Soomaaliya ilaa intii la aasaasayba.
iii-Xagaagii 2001 Colonel Jama Ali Jama ayaa diiday go’aan ka soo baxay gudi odayaala iyo wakiilada aqalka baarlamaanka ee Puntland State in la kordhiyo wakhtiga maamulka dawlada Puntland.
iv- Colonel Jama Ali Jama ayaa lacag siiyey afar iyo toban (14) xubnood oo ka mida gudiga odayaasha si ay isaga ugu doortaan madaxweynaha Puntland State. Colonel Jama Ali Jama wuxuu qortay ciidamo ugaara, wuxuuna ku qaaday dagaal ciidamada joogtada ah Puntland State. Marxuumku wuxuu ka mid ahaa odayaasha uu Jaamac lacagta siiyey si uu u taageero.
Hadaba intaas ayaan ku soo koobi lahaa qoraaladii ay is dhaafsadeen maxkamada iyo jawaabihii uu ka bixinayey Kornayl C/laahi Yuusuf oo uu usoo marinayey qareenkiisa.
Qoraalada dacwada oo ka koobnaa lix bogg oo su’aalo iyo jawaabihii uu kolba ka soo bixinayey ayaan intaas kala soo dhex baxay.
Markaas kadib ayaa waxaa iyana ii suura gashay inaan helo nuqul ka mida qoraal kii ay maxkamadu ka qaaday markhaatiyaasha oo aan ku qoraa English ayadoo isku wada mida hadalada markhaantiyaasha ayaan halkan idiin ku soo koobay. Waxaan ka cudurdaaranayaa inaan la ii golaan inaan qoro magacyada markhaantiyaasha oo dhamaystiran sababo nabadgalyo awgood.
Magacadoona waan soo gaabinayaa .
Waxaan waraystay dadka kala ah.
1-hirsi xxxx 2-Mohmed xxxx 3- Abdisalan xxxx 4-Mohamed xxxx 5-Amina xxxx
Dhamaan dadkaasi waxay isku raaceen sidan. "Waxaan ku sugnayn tuulada Kalabayr, Aug 17,2002 saacaduna waxay ahayd 11:00 subaxnimo. Waxaa wadada soo maray gawaari fara badan oo galbinayey kornayl C/laahi Yuusuf waxaa gawaaridaas oo ka yimid dhanka magaalada Garoowe kuna socday dhanka magaalada Gaalkacyo ka horyimid gaari nooca Land cruiser ka loo yaqaan oo uu Suldaanku watay. Gaariga suldaanku wuxuu ka yimid dhanka magaalada Gaalkacyo oo wuxuu ku soo jeeday jihada tuulada Kalabayr. Markii ay iska horyimaadeen gawaarida kornayl C/laahi iyo gaargiii Suldaan Axmed ayaa waxaa gawaaridii kornayl C/laahi galbinaysay ka soo laabtay laba gaari intay hareeraha ka galeen gaarigii uu watay suldaan Hure ayey joojiyeen markiiba, waa uu istaagay gaarigii Suldaan Hure isla markiiba waxaa soo degtay mid ka mida ilaalada khaaska ah ee kornayl C/laahi. Ninkaasi wuxuu ooda uga qaaday rasaas aan kala go lahayn isagoo suldaanku saaran gaarigiisii."
Dad kale oo aan ku jirin markhaantiyaasha maxkamada hadana ku sugan Puntland oon la xiriiray ayaa ii sheegay in ninka Suldaanka toogtay lagu magacaabo, xxxxx xxxxx xxxxxx. [sababo nabadgelyo awgood ayaa qoraagu uqariyey magacan]. Waxaa kaloo ay sheegeen markii Suldaanka la dilay jeebkiisa lagala baxay lacag dhan $500 doolar, saacadii suldaanku xiraana laga furtay isla markaana laga qaatay taleefankii gacanta ee uu sitay. Ninkaas alaabtaas ka qaatay maydka suldaanka ayaa lagu sheegay magaciisa xxxxx xxxxx.
Markii intaasi dhacday labadii gaari ee la socotay gawaarida kornayl C/laahi waa ay ka bexeen magaalada oo gawaaridii ay la socdeen ayey ka daba tageen. Waxaana dad magaalada ka soo galay dhanka Gaalkacyo sheegeen inay arkayeen in ay dhoobnaayeen gawaaridii kornaylka waday banaanka tuulada Kalabayr oo ay sugayeen labada gaari ee Suldaanka loo soo diray soo noqoshadooda, markii ay soo noqdeena ay arkeen gawaaridii oo isla dhaqaaqay hal mar.
Hadaba si aan u helo dhanka kornayl C/laahi waxa ay ka leeyihiin arintan iyo sida ay usheegayaan sida wax udhaceen ayaan isku dayey inaan la xiriiro kornayl C/laahi Yuusuf, waxaase la ii sheegay hadaan kala hadlayo arinta Suldaanka inaan la ii gudbinayn ee aan ka joogsado wax ka weydiinta arintan. Sidaas ayeyna iigu suuroobi weyday inaan dhanka kalana wax ka weydiiyo arintan.
Si aan wax uga ogaado sababaha kalifay in hada ay Isimada Puntland isku soo urursadaan magaalada Gaalkacyo oo u sarakacaan wax ka qabashada iyo xalinta arinta dilkii Suldaanka oo hada laga joogo mudo sannad kor udhaafaysa, ayaan waxaan la xiriiray gudoomiyaha beesha suldaanka ujooga North America oo lagu magacaabo C/rashiid Barre Muuse. Wuxuuna waraysigii aan la yeeshay udhacay sidatan.
Su’aal: C/rashiid Barre wax ma iiga sheegi kartaa sababta keentay dilkii suldaan Hurre, iyo siduu udhintay in wax wada hadal ah lagala yeeshay beesha Suldaanka?.
Jawaab: Horta siduu udhintay waxay ahayd uun wax dadkoo dhan ay hal mara ka argagaxeen, faahfaahin badan uma baahna hadaanse kuu soo koobo waxay ahayd sidan. Suldaanku oo ka mid ahaa Isimadii ka horyimid in si aan sharciga waafaqsanayn xukunka loogu kordhiyo kornayl C/laahi Yuusuf. Suldaan Hurre wuxuu ahaa nin aqoon yahan ah, suldaanku wuxuu ahaa dadkii faraha badnaa ee aaminsanaa in sharciga la ilaaliyo, in doorasho xalaala la qabto, inaan wakhtiga la iska kororsan waana taasoo qura mida keentay dilkiisa. Yaa dilay hadaad ka wado oo aad afka kala xishoonayso waxaa dilay waa cadaan mana qarsoona waa kornayl C/laahi Yuusuf si bareer ah ayuu udilay. Gaari uu saaraa markii u ka hor yimid ayuu ka daba diray qaar ka mida ilaaladiisa kuna amray inay soo dilaan. Isagu wuxuu meela badan kaga andacooday in ciidamo soo qabanayey si ay su’aalo uweydiiyaan ay is rasaaseeyeen oo uu sidaa ku dhintay, taana wax ka jiraa ma jirto. Suldaan Hure labo wiil ayaa la saaraa gaariga qori lagu ilaalinay Suldaanka ayaa amray in ay iska dhiibaan markuu arkay ciidamada ku hareeraysan, wuxuuna u sheegay in uusan doonay in cidi dartii u dhimato, hadana waxay ku jiraan labadaasi wiil markhaatiyada dhabta ah ee la hayo. Intaas markii ay dhacday ayaa kornayl C/laahi Yuusuf wuxuu sii maray tuulada lagu magacaabo Xarfo oo uu deganaa Islaan Bashiir Islaan Cabdulle oo ay kornayl C/laahi isku jifo yihiin hore ayuuna usii kaxeeyey Gaalkacyo ayuuna geeyey. Taasi waa arin dhaba oo jirta oo aan ciduna ka qarsoonayn in Isina uu soo dilo kiisiina uu yiri meesha isaga soo tag Isin baan soo dilaye.
Hadaan ka jawaabo wax wada hadala in beesha lala yeeshay ilaa markii uu dhintay Suldaanku waxaa jirta in uu kornaylku soo dirsaday dad isaga ka socda hase yeshee marna ma dhicin wada hadal toosa oo dhex maray kornaylka iyo beesha suldaan Hurre, ama beesha kornayl C/laahi kadhashay iyo beesha suldaan Hure midnaba.
Su’aal: Waxaa jirta in beryahan aan maqlayno in waan waan laga dhex wado kornayl C/laahi iyo beeshii marxuum Suldaan Hure maxaad nooga sheegi kartaa arintaas ?.
Jawaab: Waa jirtaa arintaas waxaana sababay culays kornaylka kala soo gudboonaaday maxkamad London ku taal oo laga dacwaynayay kornaylka, kuna saabsan dilka suldaanka. Dacwadii oo mudo soo socotay ayaa hada waxaa C/laahi oo marakan isu sharaxay inuu madaxweyne dalka ka noqdo la soo gudboonaatay dhibaato ku sabasan su’aalo laga weydiinayo dilkii iyo weliba codsi maxkamadu marakan ka codsatay inuu hor yimaado maxkamada, ayadoo laba goor oo horena dib loo dhigay maxkamadaas iyadoo markii ugu dambaysay dib loo dhigay maxkamadii uu lahaa Oct 24, 2003 10:00AM. Qareenkiisii ayaana codsaday in dib loo dhigo waa arintaas iyo cambaarayn dilkii uu geystay ay ku dhaleecaynayaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan shirka Kenya. Waxaa taas sii dheer sannad guuradii ka soo wareegatay dilkii suldaanka oo dhawaan lagu dhigay xarunta shirka Soomaalida uu ka socdo ee Kenya oo xuskaasi wuxuu soo jiitay indhaha dimlomaasiyiin ku sugnaa halkaas.
Su'aal: Yaa waan waanta hada wada ma kornayl C/laahi naf ahaantiisa mise cid kalaa is xilqaantay oo wada waanwaanta?.
Jawaab: Waxaa wada ololahan ma oran karo waan waan, waayo waan waan waa qof wanaag doonaya oo wanaagu daacad ka yahay, laakiin tan waxaan oran karaa waa olale uu rabo inuu kaga dhuunto maxkamada ku furan, wuxuu ku bixiyey dakhligii dawlada oo idil siduu dacwadaas uga badbaadi karo inuu uga badbaado. Wuxuuna uyeertay Isimo reer Puntland ah si ay arinta ugalaan.
Su’aal: Ma markii ugu horaysaybaa oo Isimada Puntland ay galaan arintan mise hore ayey hada ka hor ugaleen?.
Jawaab: Isimada reer Puntland waa Isimadayada waxaan uhaynaa dhamaantood xushmad, waxaanse filaynay markii xaqdarada lagu dilay nin Isim ah oo reer Puntland ah inay usarakacayaan arintaas oo wax ka qabanayaan, nasiib daro madhicin oo ma jiro Isim wax ka qabtay arintaan ama kornaylka kala hadlay. Markastase xushmad baan uhaynaa waxaanse aaminsanahay mar walba hadii si daacadimo iyo geesinimo ku jirto ay ugalaan inay wax ka oran karaan arintan.Waana markii ugu horaysay oo arintan ay Isimo galaan.
Su’aal: Maxaad ku qanacdaan hadii waan waan hala galo la yiraahdo, mase laga yaabaa in la tirtiro dacwada ka dhanka ah ee London uga furan kornaylka hadii uu heshiiskan hada uu ku hawlan yahay kornayl C/laahi hirgalo?.
"...Hadii cadaalad la falo waxaan filaa in la wada hadli karo waxna la isla gorfayn karo."
C/rashiid Barre Muuse
Jawaab: Horta anigu hada ku oran mayo waxaasaan ku qanac naa iyo waxaasaan ku qanacnaa, laakiin cadaalada wax ka fiican oo qofka dhibanaha ahi uu ku qanci karaa ma jirtaan filayaa. Hadii cadaalad la falo waxaan filaa in la wada hadli karo waxna la isla gorfayn karo.
Su’aal: Maxaad uga jeedaa cadaalad hadii la helo, ma waxaad leedahay in maxkamad la soo taago cidii ka dambaysay maahee si kale kuma qanacno?.
Jawaab: Horta hadaanu Soomaali nahay arimaheena siyaabo badan ayaan ku dhamaysan jiray xitaa waayadii aysan jirin maxkamado la isku dacweeyo, waxaan qabaa sida ugu haboon oo wada hadal loo furi karo waa iyadoo marka hore dadka garta galaya ay raali kawada yihiin labada dhinac.
Marka xigta in kornayl C/laahi qirasho iyo qoordhiibashaba sameeyo, inuu isagu dusha urito dambigaas markaas waa suuro gal in heshiis yimaado ama wax meel laysla dhigo. Laakiin hadaan qirasho iman lamaba wada hadli karo ayaan qabaa marka horeba. Arinta aad tiri maxkamada ma la hakinayaa ma la laalayaa dacwada waxaan filayaa in taasi aysan u’oolin beesha oo qura ee ay utaal caruurtii iyo xaaskii uu ka geeriyooday marxuumku iyagaana cafiyi kara tan maxkamada London ka furan. Beeshuse talo soo jeedin waa ay ku darsan kartaa hadii gudaha heshiiskaas aan sheegay laga gaaro.
Su’aal: Hadii kornayl C/laahi Yuusuf uu ku adkaysto diidmadiisa ah inuusan dilin shaqana ku lahayn maxaad yeelaysaan?.
Jawaab: Waxaan ku jawaabi lahaa Liibiya imisa sanno ayey diidanayn inay qirato qaraxii diyaaradii Loker bill ku dul burburay iyo meelo kale diyaarado lagu qarxiyey,ugu dambayn dhawr iyo toban sanno kadib ayey dawlada Liibiya qiratay dilkaas. Hada C/laahi haduu is leeyahay ummada baahan ku indha sarcaadi dhaqaalihii iyaga canshuurta looga qaaday oo xaqooda ku dulmi oo ku kala qaybi oo kala gado waxaan leeyaahy maruu qirtaba waa qiran, waxaase uroon in hadii heshiisku dhab ka yahay uu qiraal la yimaado si dawo waarta loo helo.
Su’aal: Maadaama loo fadhiyo shirkii Kenya lagana yaabo inuu dhawaan dib ufurmo, malaga yaabaa in wakhtigu ku yaraado oo kornaylku dib ugu laabto shirka oo dadkale uwakiisho heshiiskan maadaama ay adkaan karto in dhakhso wax loo dhameeyo?.
Jawaab: Sababta ugu weyn ee kornayl C/laahi Yuusuf ku soo celisay dalka ayaaba ah arintan, isagoon dhinac uridana ma filayo inuu shirka ku noqonayo. Inkastoo dadka loogu shekeeyo sheekooyin badan oo ku saabsan soo noqoshadiisan hada ah, xaqiiqduse waa culayska arintan ay ku hayso darteed iyo codsiga maxkamada London uga furan ay codsanayso inuu soo galo dalka Ingiriiska oo horyimaado maxkamada,waana sababtaas tan uu hada dalka dib ugu soo laabtay .
Intaas kadib ayaan waxaan si gaar gaara ula xiriiray aqoonyaho iyo odayaal iyo wax garad kale oo degaanka Puntland ka soo jeeda waxaana weydiiyey sida ay u’arkaan heshiiskan hada laga dhex wado beeshii Suldaan Hure iyo kornayl C/laahi Yuusuf.
Waxay dadkaas badankoodu isku raaceen in kornayl C/laahi aysan daacad ka ahayn heshiiskan ee uu doonayo oo qura inuu dadka Soomaaliyeed maqashiiyo inuu yahay nin heshiis doonaya. Waxay kaloo intaas raaciyeen in heshiisku yahay wax fiican oo dadka isku soo dhawaynaya, laakiin loo baahan yahay in labada dhinacba ay soo xulaan xubnaha dhexdhexaadinaya, hadase sida muuqata waxaa qabanqaabada iyo xulidaba gacan weyn ku leh kornayl C/laahi.Taasi waxay keeni kartaa in heshiiska aan beeshu uwada dhamaan oo kornaylku sida caadada u'ah uu had iyo jeer dadka lacag ku kala jebiyo oo inta koox isaga taageersan wax ka ansaxsado yiraahdo waxaa ila heshiiyay beeshii. Waan jeclaan lahayn beelaha Puntland oo dhamaantood nabad ku wada nool dhameeyana khilaafkoodii hore ayey raaciyeen duqaydaas iyo waxgaradkaas reer Puntland, waxayse ka digeen in shirka haatan Isimadu ufashiyaan Magaalada Gaalkacyo inuusan noqon heshiis udaneeya kornayl C/laahi oo qura. Waase in uu noqdaa heshiis ay kuwada qancaan dhamaan dhinacyada ay khusayso oo idil, waxaana illaahay uga baryaynaa ayey yiraahdeen in cadaalad waarta ay halkaas ka soo baxdo.
Waxaa isku soo duba riday, waraysiyadana qaaday .
Osman Ahmed Sheikh
Faafin: SomaliTalk Oct 27, 2003
Afeef: Qoraalkan waxaa leh qoraaga ku saxiixan